Heesaaga caanka ah Sven-Erik Magnusson oo 74 jir ku geeriyooday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sven-Ingvars oo ku sugan xarunta Skansen 24-kii bishii luulyo sannadkii 2003. sawir: Mats Andersson / TT
Heesaaga caanka ah Sven-Erik Magnusson oo 74 jir ku geeriyooday
La daabacay onsdag 22 mars 2017 kl 09.01
Muusik-yahan, laxan-yahanka Sven-Erik ayaa muddo uu xanuun-sanaa dabadeed ku geeriyooday da'da 74 jir.
- Aabbe wuxuu ahaa nin halgamaa ah wuxuuna banneeyay dalool aad u ballaaran dabadeed in muddo ah oo uu halgan kula jiray cudurka kaankarada (kansar), sida uu warqad saxaafadeed ku qoray wiilkiisa Oscar Magnusson.
Sven-Erik Magnusson wuxuu ahaa muusik-yahan aad iyo aad u jecel inuu masraxa ka heeso, muusik-yahahan uu jacaylka uu u qabo muusikada ay gaarsiisay inuu laxan-dhiggana ku darsado. Wuxuu ahaa fannaanka keliya ee kooxda ku haray muddadii 60-ka sannadood ahayd oo ay kooxda Sven-Ingvar jirtay intii soo martay.
Sven-Erik Magnusson iyo turumb-yahanka Sven Svärd oo ka dambeeyay aasaaskii koox heesaha ee loogu magac darey Sven-Ingvars ayey qalinka ku duugeen heeskii bandhigeed ee ugu horreeyay, midkaasina oo ka dhacay aqalka ummadda ee Segmon Sannadkii 1956.
1960 ayuu soo saaray albumkii uu ku soo caan-baxay ee "Te dans med Karlsta-töserna", albumkaasina oo ey ka dambeeyeen albummo fara badan oo soo jiitay bulshada.
Kooxda Sven-ingvars ayaa sannadguuradii kooxda ee 50-aad waxay carwo muusik ah ku qabteen maqaayad, halka ay kooxdu sidoo kale carwo aan dhiggeeda la arag ku dhigeen xafladdii heesaha Hultsfredsfestivalen sannadkii 1991. Halka sannadkii 2016 kooxda loo doortay inay xubin ka noqoto Music Hall Of Fame.